Sidee loo doortaa walxo dabiici ah oo dabacsan?
1. Maxay tahay in la tixgeliyo marka laga iibsanayo qalabka isku dhejisan ee dabiiciga ah khadka tooska ah? Sidee loo sameeyaa xulashada saxda ah? Iibsiga khadka tooska ah ee walxaha ku-xirnaanta dabiiciga ee macnaheedu yahay in sheyga laga iibsado websaydhka warshadaha. Sidaa darteed, waxaa jira xoogaa khuseeya ...
Qaybta ka hortagga dabka ee Wei Cheng si ay u sameyso dab-damis sugan, waan ka sii fiicnaan karnaa
Maaddaama ay tahay nooc cusub oo qalabka wax lagu xiro, moduleka dab-demiska ah wuxuu si dhakhso leh u qabsaday dhererka amarka ee qalabka fiilada wuxuuna noqday mid kale oo loogu jecel yahay suuqa qalabka dhismaha. Dhalashada moduleka dabka-celiya ayaa ka dhigtay walxaha dhaqameed ee dhaqaajiya midab, ...
Xirmada dab-damiska "Ballaarinta" waxay keeneysaa difaac sare oo ka-hortagga dabka
Sanadihii la soo dhaafay, gobolku wuxuu feejignaan dheeri ah u siiyey ka hortagga dabka ee mashaariicda dhismaha, tiro aad u badan oo ah qalabka ka hortagga dabka ayaa lagu dabaqay dhismaha injineernimada. Bacda d--3-cd01 dabka-celisa waa nooc cusub oo taageero dab-caddeyn ...
Sidee loo xisaabiyaa xaddiga dalabka ee xarkaha dab-damiska
Dahaarka dabka kaabiska ka hortagga waxaa badanaa laga sameeyaa noocyo kala duwan oo ka-hortagga dabka iyo bacrimiye. Waxay sameysmi kartaa lakab isku dhejis ah oo isugeyn ah oo daboolaya xumbada dabka marka uu jiro dabka. Waxay si wax ku ool ah u xakameyn kartaa oo xannibi kartaa faafidda iyo fiditaanka ololka waxayna ilaalin kartaa fiilooyinka ...